Soomaaliya oo eed xooggan u jeedisay Kenya | KEYDMEDIA ENGLISH
Soomaaliya oo eed xooggan u jeedisay Kenya
Safaaraddu waxa ay sheegtay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ay si bareer ah u casuuntay shaqsi ka soo jeeda degaannada Somaliland ee Soomaaliya, si uu qeyb kaga noqdo, kulankii xog-warranka diblomaasiyadda ee Uhuru Kenyatta, mudnaan u dhiganta safiir buuxana la siiyay.
NAIROBI, Kenya – Safaaradda Soomaaliya ee Nairobi, ayaa Dowladda Kenya ku eedeeysay in ay ku xad-gudubtay Midnimada iyo Madaxbanaanida Dhuleed ee Soomaaliya, kadib markii Uhuru Kenyatta hab maamuus u dhigma diblumaasi dal madax bannaan siiyay ergo ka socotay Soomaaliland.
War qoraal ah oo ka soo baxay Safaaradda ayaa lagu sheegay in Safiirka Soomaaliya ee Kenya Amb. Maxamuud Axmed Nuur [TARSAN] uu ka baxay kulankii Khudbad Sannadeedka Madaxweynaha ee Diblomaasiyiinta, kaasoo maanta ka dhacay Aqalka Madaxtooyada Kenya.
“Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa in sharaxaad buuxda laga bixiyo xadgudubyadan ka dhanka ah madax-banaanida Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Kenya ku kacday”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Soomaaliya.
Waxaa jirtay rajo ku aaddan in Kenya ay soo laabto waddadii qodxaha badneyn ee shantii sano ee la soo dhaafay, maadaama uu Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh sheegay in muhiimaddiisa 1-aad tahay, xasilloonida diblumaasiyadda, hayeeshee talaabada Nairobi, waxa ay muujineysaa shaki xooggan.
Bilowgii sanadkaan, Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Raychelle Omamo ayaa u cadeysay Somaliland inaysan u aqoonanayn "Wadanka Madax-banaan", ayna ula macaamilayaan sida Maamul Goboleed, waxayna xilligaas xustay in uusan jirin codsi uga yimid Maamulka Hargeysa, oo ku aadan aqoonsiga gaar ah.
Somaliland 30 sano ayay raadinaysaa ictiraaf ay qiimo kasta ku bixisay inay hesho, hayeeshee waxaa la isku raacsan yahay in Somaliland aqoonsigeeda uu yaallo Muqdisho, oo looga baahan yahay inay kala hadasho, sida uu dhawaan ku dooday Wasiirka Ingiriiska Arrimaha Africa u qaabilsan Vicky Ford.